Nkwado Nchebe Akụ nke Cook Cook Offshore
﻿﻿﻿Nkwado Cook Islands na-enye nchekwa akụnụba kachasị n'ụwa niile. N'ebe ndịda nke Hawaii, Cook Islands egosiwo oge na oge ọzọ iji nweta akụkọ nchebe iwu gbasara ntụkwasị obi bara uru. Ọnọdụ ọ bụla nke gbaghaara ya, echebere akụ nke onye ahịa. Lee otu ihe atụ. Kedu onye kacha sie ike na ọ ga - abụ onye mmegide iwu? Ọtụtụ ga-asị gọọmentị United States. Enwere ngụkọta nke oge abụọ gọọmentị US gbalịrị imebi ntụkwasị obi ahụ. N'okwu abụọ a, gọọmentị furu efu ma chebe akụ ahụ n'ime ntụkwasị obi ahụ.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na anyị agaghị ama ụma guzobe ntụkwasị obi nchebe akụ na ụba iji gbochie akụ na ụba na gọọmentị US. Ya mere, anyị na-edepụta otu eziokwu iji gosipụta ike nke ngwa ọrụ iwu a. Yabụ, anyị anaghị ekwu na mmadụ kwesịrị iji ụdị ụgbọ a rụọ ọrụ n'ụzọ a.
Kedu otu Cook Islands Trust si arụ ọrụ
Nke a bụ otu esi arụ ọrụ Cook Islands Trust Trust. Onye na-ekpe gị ikpe n’ụlọikpe na-agwa gị ka ụlọikpe gwa gị, “Nyefee ego gị.” Yabụ, ị kwenyere na ịdegara onye na-elekọta ụlọ akwụkwọ ozi ka ha mara na enyere gị iwu iweghachi ego ahụ. Na-edebe otu akwụkwọ ozi ahụ na nọmba nsuso gị ma gosipụta ọka ikpe ị kwadoro. N'aka nke ọzọ, achọrọ ka onye nlekọta ụlọ ahụ rube isi na ntuziaka edere na akwụkwọ Cook Islands Trust. Ọ bụ ntụkwasị obi nchebe akụ. Yabụ, anyị na-etinye “nkebi ahịrịokwu nrụgide” na ntụkwasị obi. Ngalaba a na-ekwu na amachibidoro onye na-elekọta ụlọ ọrụ ịhapụ ego mgbe a na-amanye onye na-erite uru ime ihe site na ikpe ụlọ ikpe.
Ya mere, onye nwe ụlọ, onye bi na mpụga obodo gị ma na mpụga ụlọ ikpe gị, agaghị akwado. A na-echebe gị pụọ na nsogbu n'ihi na ị na-agbaso iwu nke onye ọka ikpe. Nke ahụ bụ, ị rịọrọ onye nlekọta ụlọ ka ọ weghachi ego ahụ. Ya mere, ị nọ n’ọnọdụ ebe ị rubere isi n’iwu nke ọka ikpe. Otú ọ dị, onye nlekọta ụlọ ahụ emeghị, nke bụ ezigbo ihe nchebe.
Iji ntụkwasị obi dị n'akụkụ mmiri dị ka onye nwe azụmaahịa na-ehiwe ụlọ ọrụ na Nevada ma ọ bụ Delaware. Ọ ga-eme nke a n'ihi iwu ka elu ha, karịa ịmebe ụlọ ọrụ na steeti ọzọ. Tọ ntọala ntụkwasị obi na Cook Islands ma ọ bụ ikike ọzọ kwesịrị ekwesị iji rite uru na iwu iwu ha bụ otu. Ọ bụ okwu ịhọrọ ikike nke iwu kacha mma maka ọnọdụ gị.
Kedu ka m ga-esi tụkwasị obi onye nlekọta Cook Islands?
Nke mbụ, ọ dịghị mkpa ka onye nlekọta ụlọ tinye aka na ya ruo mgbe “ihe ọjọọ” ahụ mere. Nke abuo, enwebeghị onye na-elekọta ụlọ nke were ego onye ahịa. Nke a bụ otu akụkụ n'ihi na gọọmentị Cook Islands na-ahọpụtacha oke nke onye ha kwere ka ha nwee ikikere onye nlekọta ụlọ. Ọzọkwa, ha na-echebe ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego ha n'ụzọ siri ike. Ngwaọrụ iwu a bụ nnukwu ụzọ esi enweta ego na mpaghara ahụ. Yabụ, enyere ndị na-elekọta ụlọ ọrụ ikike, na-enyocha ma na-enyocha ha anya. Nke ato, ụlọ ọrụ mkpuchi jikọtara ndị na-elekọta ụlọ, yabụ ejiri ego enyere gị n'aka. Ọzọkwa, buru n'uche na ị na-eguzobe ngwa ọrụ iwu a iji chebe akụ megide iwu na-enweghị isi na nke isi ike.
Yabụ, ị ga - enwe ohere ịnweta ụlọ ọrụ ụlọ ikpe 100% maka ego gị? Ma ọ bụ ị ga - achọ ịnwe ụlọ ọrụ nwere ikike, nke ejikọtara ọnụ, onye na - anaraghị ego ndị ahịa mee ihe ị kwụrụ ha iji mee: chebe ego gị. Na mgbakwunye, anyị na-eji ụlọ ọrụ ntụkwasị obi nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri anọ.
Tupu “ihe ọjọọ” ahụ emee, ọ bụ gị bụ onye na-adọta ụdọ. Are na-ejikwa akaụntụ akụ, wdg. Kedu? Anyị na-etolite ụlọ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ n'ụsọ oké osimiri (LLC), na agwaetiti Caribbean nke Nevis n'ihi na ikike a na-enye nchebe bara uru nke LLC. Ntụkwasị obi nwere 100% nke LLC. Are bụ onye njikwa LLC. A na-edebe ego ụlọ akụ na LLC. Are bụ mbinye aka na akaụntụ akụ.
Yabụ, iji nyochaa, ntụkwasị obi nwere ọdụ ụgbọ mmiri LLC. Are bụ onye njikwa nke ọdụ ụgbọ mmiri dịpụrụ adịpụ. Maintain na-ejikwa akara ntinye aka na akaụntụ ụlọ akụ.
Mgbe “Ihe Ọjọọ” ahụ Na-eme
Mgbe “ihe ọjọọ” ahụ mere, onye na-elekọta ụlọ ga-echebe gị wee dochie gị dị ka onye njikwa nke .lọ ọrụ ahụ. Yabụ, mgbe enyere gị iwu ka ị weghachi ego ahụ, onye na-elekọta ụlọ, onye bi na mpụga nke obodo ahụ ma na-enweghị agbụ nke ụlọ ikpe mpaghara gị, na-echekwa akaụntụ gị.
Ikwughachi, maka nchekwa ego na uche nke onye ahịa, naanị oge onye na-elekọta ụlọ na-abanyekarị bụ mgbe ụlọ ikpe ga-ewe ego gị. Yabụ, dịka e kwuru, ọ ka mma itinye ego gị na ngwa ọrụ iwu nke chebere ego ndị ahịa oge ọ bụla karịa ka ọ bụrụ 100% ijide n'aka na onye mmegide iwu gị ga-eji akụnụba gị siri ike gbapụ, ị gaghị ekwenye ?
Ozugbo “ihe ọjọọ” ahụ kwụsịrị njikwa, njikwa nke LLClọ ọrụ ahụ, laghachikwute gị ma ịlaghachi n'oche onye ọkwọ ụgbọala ka ego gị niile ga-eji. Mgbe ị nọ n'etiti nrụgide iwu, onye na-elekọta gị nwere ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ maka gị. Ha nwere ike izipu ego nye ndị ị tụkwasịrị obi ndị ga-elekọta gị, wdg. Ya mere, a na-elekọta gị anya maka ego, mana ndị na-emegide gị enweghị ike ị nweta ego ha. Nsonaazụ nsonaazụ bụ na ego nke ị dọgburu onwe gị n'ọrụ ma rụọ ọrụ maka ya enweghị nchekwa na nchekwa.
The Ultimate Asset Protection Ngwá Ọrụ
Only na-enweta otu ohere n’ụwa a. Yabụ, ịnụ ụtọ nchebe anyị na-ekwu maka ebe a chọrọ ọrụ n'akụkụ nke gị. Mee ka ntụkwasị obi gị guzosie ike. Tinye ego gị na ya. Anyị ahụla ọtụtụ ndị ahịa na-ekele anyị nke ukwuu maka inyere ha aka irite uru nke nhọrọ a na ịdebe ihe niile ha rụrụ ọrụ. N'aka nke ọzọ, anyị ahụla ka ndị ahịa tufuo ihe niile site na mkpọnwụ nke nyocha.
Onwere ụfọdụ ndị nwere mmasị onwe ha, dịka ndị otu ọrụ iwu ahụ anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na echedoro akụ gị, ndị ga-anwa igbochi gị ịmebe ntụkwasị obi. Ha nwere ike gbalịa imenye gị ụjọ ma kọwaa ụfọdụ ikpe dị obere ebe ọka ikpe esoghị iwu ebe a baara ndị bara uru ụdị ntụkwasị obi ahụ mba. Ihe ndị dissuaders a agaghị agwa gị bụ akụkọ a dum. Dịka ọmụmaatụ, n'okwu Anderson, ntụkwasị obi ahụ ezighi ezi. Onye ọka iwu guzobere ntụkwasị obi a mere ka ndị ahịa ya bụrụ ndị ritere uru na ntụkwasị obi na ndị nchebe nke ntụkwasị obi ahụ.
Nke a bụ nzuzu nzuzu n'aka onye ọka iwu n'ihi na ọ mere ka onye ritere uru n'ọnọdụ ọzọ nke inwe mmetụta n'ịgbanwe ndị na-elekọta ụlọ na ndị na-erite uru. Onye ọka ikpe ahụ kwuru na ha n'ihi na ndị ritere uru ahụ bụkwa ndị na-echekwa na ha kere ha enweghị ike ime ihe. Ozi ọma ọ bụ na ikpe a bụ ọgbụgba ndụ na-enweghị atụ na ọbụlagodi na ebe edobere ntụkwasị obi ahụ, ntụkwasị obi ka na-echekwa akụ ndị ahịa ya.
Iwu ikpe bụ akụkụ nke ndụ
Ugbo ọ bụla nwere ahụhụ na ahịhịa ya. Yabụ, a ghaghị ilekọta ogige ọ bụla. Toghara iche otú ahụ bụ nzuzu. Ilekọta ogige ahụ na-eme ihe. Ichebe ego gi adighi iche. Ikwesiri ime ihe iji chekwaa ubi ego gi ma obu ihe eji eme ya na ahihia. Iji mee ka ogige dị mma, achọrọ ihe.
Nchebe kachasị ike ntụkwasị obi a na-enye bụ maka ego mmiri ejiri na akaụntụ nchekwa mba ofesi. Lọ akụ a na-eji n'ọrụ ekwesịghị inwe alaka ụlọ ọrụ kwekọrọ na mba gị. Banyere ụlọ, ụlọ ikpe mpaghara nwere ike ijide ala na mpaghara. Yabụ, ịnweta ụlọ na ụlọ ọrụ LLC nke ntụkwasị obi ahụ dị mma. Agbanyeghị, mgbe ihe ọjọọ mere ka isi ya jọọ njọ ọ ka mma iji ree ụlọ ngwa ngwa ma chekwaa ego dị n'ụsọ mmiri karịa ka ọ ga-efunahụ ihe niile. Dika ozo, mmadu puru idekọ ihe kwesiri ekwesi megide ngwongwo ma mechie ihe anatara na akaụntụ di otua na ntukwasi obi / LLC.
Anyị na-echebe ndị ọkachamara
Na mgbe niile, anyị guzobere ntụkwasị obi maka ndị ọka iwu bụ ndị, n'aka nke ha, na-eresị ha ndị ahịa ha. Anyị na-akụzikwara ndị otu ọrụ iwu iwu nzukọ ọmụmụ ihe gbasara nchekwa akụ. Na mgbakwunye, anyị debere ọtụtụ ntụkwasị obi ozugbo maka ndị ahịa anyị. Enwekwara ike ịgbakwunye atụmatụ atụmatụ ala na ntụkwasị obi; nsụgharị legalese nke, "Mgbe m nwụrụ, ihe ọ bụla na-agara di ma ọ bụ nwunye m na mgbe anyị abụọ nwụrụ anwụ ihe niile na-abanye nha anya nke ụmụaka," dịka ọmụmaatụ.
Kpachara anya banyere otu onye na-eweta ọrụ n'ọma ahịa nke atụmatụ ya na-akwalite usoro ntụkwasị obi nke ya site na iweda nhọrọ nhọrọ nchekwa ọ bụla anya, gụnyere nhọrọ anyị na-atụle n'ime ebe a. Ọ na-akwalite ntụkwasị obi obodo ya na-adịghị ike, nke na-adịghị ejide n'ụlọ ikpe, ma na-ewedata nhọrọ niile mana nke ya. Ọ baghị uru ikwu, ọ naghị ekwupụta ọtụtụ ikpe na-egosi ike ntụkwasị obi na Cook Islands. Naanị ya na-atụle ikpe ole na ole dị njọ ebe ndị ọka ikpe anaghị agbaso iwu ma nye ndị tụkwasịrị obi ntụkwasị obi ire. Ọzọkwa, ọ na-agba egwu na eziokwu ahụ na ntụkwasị obi na-echebe ego onye ahịa ya oge ọ bụla.
Nsogbu doro anya nke nhọrọ ọ na-akwalite bụ na ntụkwasị obi mpaghara ya nwere ike ịpụ dị ka ijiji n'okpuru imi nke onye ọka ikpe mpaghara. Ya mere, site n'ike a na-enweghị atụ nke Cook Islands gosipụtara ọtụtụ oge, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime anyị nọ na mpaghara nchekwa akụ na-enweghị ebumnuche na-enweghị isi kwetara na ntụkwasị obi a tụlere ebe a na-enye, ugbu a, nchebe kachasị ike bara uru taa.
Kpọọ oge ọ bụla, awa 24 kwa ụbọchị, maka ozi ndị ọzọ gbasara ịtọlite ​​Cook Islands Trust, Nevis LLC na akaụntụ ndị dị n’èzí iji kpuchido akụ gị.
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 29, 2021